Generator Sets များ
5kw Welding Generator Set ဖြစ်သည်
Frame Type ကိုဖွင့်ပါ
Silent Canopy အမျိုးအစား
Generator Set များအတွက် Spare Parts များ
Sea Water Desalination Genset ဖြစ်သည်
Cooling, Heating နှင့် Power System တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ
၂၁-၁၀-၁၅ တွင် admin မှ
၁.genset လည်ပတ်မှု၊ ဆီစုပ်စက်သည်အဆီမရှိ (သို့) အဆီနည်းသည်။ Genset ရပ်တန့်ခြင်း၊ ဆီလွှဲစက်၏လက်စုပ်စက်၊ ဖိအားကိုလောင်စာဆီစုပ်စက်မှအဆက်မပြတ်လျှံစေသည်။ ပျက်ကွက်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း 1. လောင်စာဆီထိုးစက်စုပ်စက် plunger အစိတ်အပိုင်းများနှင့်နွေ ဦး ပျက်ကွက်ခြင်း၊ 2. Fuel injection pump ဖြန့်ဝေမှုအဆို့ရှင် ...
ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု၊ ဒီဇယ်မီးခြစ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှု၊ သုံးအဆင့် ac synchronous မီးစက်မှထုတ်လုပ်သောဗို့အားသည် ၉၅ v ပျက်ကွက်ခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း stator ၏ multi-meter တိုင်းတာမှုအပိုင်းကိုသုံးပါ၊ rotor winding resistance သည်ပုံမှန်ဖြစ်လျှင်အလိုအလျောက်ထိန်းညှိရေးဘုတ်အဖွဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ မရ။ ဒုက္ခ ...
ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံးမီးစက်အစုံများကိုနေ့စဉ်သုံးရာတွင်အချို့ချို့ယွင်းမှုများသည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏အမှားကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဘုံချို့ယွင်းချက်နှင့်အမှားအကြောင်းရင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုမိတ်ဆက်သည်။ ဒါလည်း ...
၂၀၂၁ Taizhou စက်မှုကုန်စည်ပြပွဲ (TIE)
Your Like Power (Fuzhou) Co. , Ltd သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပြပွဲများသည်လေစုပ်စက်နှင့်အထွေထွေမော်တာများအတွက်မော်တာအိမ်များဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုသည်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်သည်။
ကောင်းမွန်သောလောင်ကျွမ်းမှုရရှိရန်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အားပုံမှန်လည်ပတ်စေပြီးချွေတာသောလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဆေးထိုးခြင်း၏ရှေ့ရှုထောင့် <တပ်ဆင်မှုပြီးနောက်လောင်စာထောက်ပံ့မှုအရှေ့မှ ၂၈ မှ ၃၁ ဒီဂရီနှင့်ဆေးထိုးခြင်းရှေ့ ၂၀-၂၃ ဒီဂရီ> ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် ...
၂၁ ကြိမ်မြောက် China International Electric Motor Expo and Forum
21-07-06 တွင် admin မှ
သင်၏ Like Power (Fuzhou) Co. , Ltd သည်ဇွန်လ ၂၇-၂၉၊ ၂၀၂၁ တွင်ရှန်ဟိုင်း New International Expo Center ၌ ၂၁ ကြိမ်မြောက် China International Electric Motor Expo and Forum ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၂၁ ကြိမ်မြောက်တရုတ်နိုင်ငံတကာပြပွဲနှင့်လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး BBS by GUO HAO exhibition (Shanghai) co ။ , LTD ။
ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံ၏ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်၏သက်ရောက်မှုများကားအဘယ်နည်း။
မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းသောသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဒီဇယ်မီးစက်အစုံမပါပါက၎င်းတို့၏လည်ပတ်မှုသည်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်လိမ့်မည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်သုံးချက်၊ အမြင့်၊ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆတို့သည်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအပေါ်အထူးသိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဒီဇယ်အသုံးပြုမှု ...
ပျက်ကွက်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် Diesel အင်ဂျင်ဆီဖိအားအတွက်ဖြေရှင်းချက်နည်းသည်
မအောင်မြင်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - A .. ဆီအဆင့်၌ဆီစုပ်စက်နိမ့်သည်။ B. ရေနံဖိအားထိန်းညှိခြင်းနွေ ဦး ကျိုးခြင်း၊ C. ရေစစ်စစ်ရာဘာဖျာအိုမင်းခြင်းဆီယိုစိမ့်ခြင်း D. ဆီဖိအားဖိအားမီတာကွဲခြင်းအီးဆီစုပ်စက်ရှိဆီစစ်ထုတ်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းရန် A. ဆီစုပ်စက်ကိုအပြည့်ထည့်ရန်အချိန်မီဆီ B. B ...
21-05-19 တွင် admin မှ
Power backup diesel genset သည်အစမရပ်နိုင်ပါ၊ အလိုအလျှောက်ပျက်ကွက်ခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 1.Diesel အင်ဂျင်သည် relay ကိုအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ 2.diesel engine solenoid ပျက်သွားသည်။ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း 〈1〉 မီတာပေါင်းများစွာနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပိတ်ပစ်ခြင်းကိုတိုင်းတာလျှင်၊ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်သောဗို့အား ၂၅.၅ V ဖြစ်သည်။
ဒီဇယ် genset အင်ဂျင်မှထွက်သောမီးခိုးငွေ့သည်ပုံမှန်မဟုတ်လျှင်ချို့ယွင်းချက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအဖြေရှာပါ
ဝန်အားနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှု၊ အိပ်ဇောမီးခိုးအရောင်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီးမီးအားအနည်းငယ်ကြီးလာသောအခါမီးခိုးရောင်သို့ပြောင်းသွားနိုင်သည်။ ဤတွင်အိပ်ဇောမီးခိုးအရောင်မူမမှန်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ မီးခိုးငွေ့သည်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အိပ်ဇောမီးခိုးသည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အိပ်ဇောမီးခိုးသည်အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ၁、 မီးခိုးမည်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။
ပျက်ကွက်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အဖြေရှာခြင်းသည်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏အင်ဂျင်အတွက် အစပြု၍ မရပါ
ဒီဇယ် genset အင်ဂျင်ကိုမစနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ အောက်ပါအချက်လေးချက်တွင်အဓိကအားဖြင့်၊ 1.start system Failure Analysis A.Start ဘက်ထရီဗို့အားနိမ့်သည်၊ အမှန်တကယ်စွမ်းရည်မလုံလောက်ပါ။ (ဗို့အား virtual voltage အဖြစ်ပြသည်)
21-04-14 တွင် admin မှ
ဒီဇယ်မီးစက်အစုံသည်လည်ပတ်နေစဉ်မီးခိုးများထွက်လာနိုင်သည်။ မီးခိုးအရောင်များသည်မတူညီသောအပြစ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒီဇယ်မီးစက်၏မီးခိုးများကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ပါကဒီဇယ်ဂျင်နရေတာတပ်ဆင်မှုပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်စတင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ ဒါတွေကတော့မီးခိုးငွေ့အခြေအနေအချို့ပါ ...
တယ်လီဖုန်း၀၀၈၆- (၀) ၅၉၁-၈၃၄၃၁၅၉၆
မြေ ၃၊ စက်မှုဥယျာဉ်၊ Huanxi မြို့၊ Jin'an ခရိုင်၊ Fuzhou၊ Fujian၊ တရုတ်